ဘေဘီလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ ပုစွန် ကျွေးမလဲ ........ - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေး ကို အသက် ၆ လမပြည့်ခင် ( solid food ) စတင် မိတ်ဆက်လို့ မရခင်ကတည်းက ကျွေးချင်နေတာတွေက ခပ်များများရယ် ဟုတ် မေမေတို့ ဘွားဘွားတို့ရေ ….. စားကောင်းတာလေး တစ်ခုခု စားလိုက်တိုင်း ဘေဘီလေးများ စားချင်မလား ….. ကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်က အမြဲလိုလို ဖြစ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီစိတ်လေးက ဘေဘီလေးကို ချစ်တဲ့ ဘွားဘွား၊ မေမေ၊ တီတီတိုင်းမှာ ဖြစ်မိတဲ့ ဆန္ဒပါ။ ဒီတစ်ခေါက်လည်း ပုစွန် ကင်စားမယ်။ ပုစွန် နဲ့ နာနတ်သီးလေးပါတဲ့ ပီဇာလေး စားရင်း ဘေဘီလေးများ စားချင်မလားလို့ တွေးမိနေနိုင်တဲ့ ဘွားဘွား၊ မေမေ၊ တီတီတို့ သိချင်နေမယ့် မေးခွန်းလေးအတွက် ဆောင်းပါးလေးကနေတဆင့် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ ပုစွန် ကျွေးမလဲ ……..
ဘေဘီလေး အနေနဲ့ အသက် ၆ လ ပြည့်ပြီဆိုရင် solid food စစားလို့ ရပါပြီ။ ရေထဲကနေရတဲ့ ပုစွန်လေးတွေကိုတော့ ဘေဘီလေး အသက် ၆ လ ပြည့်လို့ solid food စစားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ စကျွေးလို့ ရပါပြီ။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖြစ်ဖို့နဲ့ သေချာ ကျက်အောင် ချက်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။
တချို့တွေကလည်း ကလေးနဲ့ ပုစွန်နဲ့ ဓာတ်မတည့်မှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်ခံအား ကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးပြီဖြစ်တဲ့ ၁နှစ်အရွယ်မှ စကျွေးပါ။ စစကျွေးခြင်းမှာ ပုစွန်ကိုပဲ သီးသန့် အနည်းငယ် ကျွေးကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ဓာတ်မတည့်တာ ရှိမရှိ၊ အင်ပျင်တွေ ထွက်လာသလား၊ ကလေး အသက်ရှူကျပ်လာသလား စောင့်ကြည့်ပါ။ ဘာမှမဖြစ်မှ ပုံမှန်အတိုင်း ကျွေးပါ။
ပုစွန် မှာဘယ်လို အာဟာရတွေ ပါဝင်နေလဲ …..
ပုစွန် က ဘေဘီလေးတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အာဟာရ ရင်းမြစ်တစ်ခုပါ။ ပုစွန်မှာ
ပရိုတင်း ( ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်)
ဗီတာမင် B ( ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်စေပြီး အာရုံကြောစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်)
ကယ်လ်ဆီယမ် ( အရိုးနဲ့ သွားတွေ ကြံ့ခိုင်သန်မာစေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်)
သံဓာတ် ( သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးတယ်။ အားအင်ပြည့်စေတယ်)
ဆီလီနီယမ် ( ကိုယ်ခံအား ကျန်းမာစေနဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်) တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
ပုစွန်က ဘေဘီလေးကို ဘယ်လို ကျန်းမာစေနိုင်သလဲ …..
ပုစွန် က ဘေဘီလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို ပုစွန် ကျွေးပေးတာက
Omega-3 fatty acids ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ ဦးနှောက်ပို ဖွံ့ဖြိုးစေသလို အမြင်အာရုံနဲ့ အရိုးတွေကိုလည်း သန်မာဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါတယ်။
အရိုးနဲ့ သွားတွေ သန်မာစေတယ်
ဗီတာမင် D ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကယ်လ်ဆီယမ် နဲ့ အခြား သတ္တုဓာတ်တွေကို အကောင်းဆုံး စုပ်ယူနိုင်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ အရိုးနဲ့ သွားတွေကို သန်မာစေနိုင်ပြီး အရိုးပျော့တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ရှိသင့်တဲ့ အရပ်ရှိစေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
သံဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင် A ပါဝင်နေမှုက ကိုယ်ခံအားကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေ အန္တရရာယ်ကနေ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် A ပါဝင်နေတာကြောင့် အမြင်အာရုံဆဲလ်တွေကို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေပြီး အမြင် အာရုံ ကျန်းမာစေဖို့ နဲ့ အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ထောက်ကူ ပေးပါတယ်။
ပုစွန်ကနေရတဲ့ ပရိုတင်းက ဘေဘီလေးကို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ် တစ်ရှူးတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးတယ်
ပုစွန်မှာ ဖော့စဖရိတ်၊ ဇင့်၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်တို့ အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
ဗီတာမင် B12 ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေ အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ထောက်ကူ ပေးပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ပုစွန်က ဘေဘီလေးကို အဆီပိုတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး အားဖြည့် ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ….. ဘေဘီလေးကို ပုစွန် ကျွေးလို့ ရပါတယ်နော် မေမေတို့ ဘွားဘွားတို့ရေ ……..
Can Babies Eat Prawns? https://canbabieseat.com/prawns/ Accessed Date 14 October 2021
Can babies eat prawns? https://www.netmums.com/baby/can-babies-eat-prawns Accessed Date 14 October 2021
Health Benefits of Shrimp for Children https://parentinghealthybabies.com/health-benefits-of-shrimp-for-children/ Accessed Date 14 October 2021